Alshabaab oo Saacado gudahood xukun Toogasho degdeg ah ku fulisay 11 Qof (Akhriso Magacyada) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Alshabaab oo Saacado gudahood xukun Toogasho degdeg ah ku fulisay 11 Qof (Akhriso Magacyada) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Alshabaab oo Saacado gudahood xukun Toogasho degdeg ah ku fulisay 11 Qof (Akhriso Magacyada)
Alshabaab ayaa muddo saacado gudahood ah xukunno Dil Toogasho ah ku fulisay 11 qof oo lagu soo eedeeyay basaasnimo, waxayna toogashadaasi ka dhacday Gobolka J/Dhexe.
Toogashada hore waxay shalay galab ka dhacday degmada Saakow ee Gobolka J/Dhexe, waxaana lagu dilay lix qof oo mid ka mida ay haweeney ahayd, iyagoo dhammaantooda lagu eedeeyay basaasnimo iyo inay qeyb ka ahaayeen duqeymo ka dhacay Kuunya-barrow.
Maanta waxay Alshabaab toogasho ku fulisay 5 ruux oo lagu soo eedeeyay inay ahaayeen Jawaasiis u shaqeeya Mareykanka iyo Ingiriiska, waxaana lagu toogtay degmada Jilib. Arrintan ayaa ka danbeysay markii degaanada Puntland lagu toogtay 21 xubnood oo lagu helay inay ka tirsanaayeen Alshabaab (Ka akhriso halkan).
Magacyada Xubnaha lagu toogtay degmada Jilib:
1- C/raxmaan Axmed Maxamed (Warsame) 35 sano jir, lagu eedeeyay inuu Basaas u ahaa Sirdoonka Ingiriiska ee MI5 iyo inuu ahaa mulxid aan diin lahayn. (Wuxuu ku biiray Alshabaab)
2- Sacad Muuse Xaaji Daahir oo 45 sano jir ah, lagu eedeeyay inuu la shaqeeyay FBI-da Mareykanka -Gudaha USA-, kadibna loo soo diray Soomaaliya.
3- Cabdow Mad Abow, waa 47 sano jir ah oo lagu eedeeyay inuu u shaqeyneyay sirdoonka Mareykanka oo uu fuliyey duqeymo ka dhacay Kuunyo-Barrow.
4- Cabdulle Cumar Maxamuud (Fargeeto) oo 35 sano jir ah, waxaa lagu eedeeyay inuu la shaqeeyay sirdoonka Mareykanka, qeybka ahaa duqeymo ka dhaca Sh/Hoose.
5- C/qaadir Caddaan Xasan waa 49 sano jir, waxaa lagu eedeeyay inuu la shaqeeyay sirdoonka Mareykanka, xogna ka gudbiyey Alshabaab.
Magacyada xubnaha lagu toogatay Saakow:
6- Cumar C/qaadir Hiiraale oo da’diisu tahay 36 jir, kuna eedeysan duqeymo ka dhacay Kuunyo Barrow.
7- Cabdi Xasan Axmed oo 29 sano jir ah, laguna eedeeyey duqeymo ka dhacay Kuunya Barrow.
8- Fartuun Cumar Abkow (Fartuun Farto) oo 36 sano jir, waxaa lagu eedeeyay inay ka ahayd duqeymo ka dhacay Kuunya Barrow.
9- Ibraahim Cumar Cali oo 55 sano jir ah, oo lagu eedeeyay inuu kamid dabagalka ku hayay Oday Bile oo lagu duqeeyey Kuunya Barrow, isagoo gudbiyay numberka Sheekh Ismaaciil.
10- Saadaam Cusmaan Maxamed Nuur 21 sano jir lagu soo eedeeay inuu basaas u ahaa Mareykanka, qeybna ka qaatay duqeyn ka dhacday Kunya barrow
11- Aweys Xasan Xaaji Maxamed (Yaaw) 36 sano jir, lagu soo eedeeyay inuu macluumaadka Alshabaab u gudbin jiray Sirdoonka Mareykanka, waxaa kaloo lagu eedeeyay inuu ahaa Sixiroole.
Previous articleJabhadda Tigray oo dib u qabsatay Caasimadooda iyo Dabaaldegyo ka socda magaalada Makelle
Next articleFaarax Macallin oo fuleynimo ku tilmaamay tallaabadii uu Farmaajo kusoo celiyey xiriirkii Kenya